Mpandeha fiaramanidina maherin'ny 30,000 no voakasiky ny fitokonana tany Taiwan
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpandeha fiaramanidina maherin'ny 30,000 no voakasiky ny fitokonana tany Taiwan
Tafiotra mahery vaika Taiwan
Ireo mpikambana ao amin'ny Union Pilot Union Taoyuan dia manao fifidianana raha hanao fitokonana izy ireo amin'ny toe-draharaha.
Ireo mpikambana ao amin'ny Union Pilot Union Taoyuan dia manao fifidianana raha hanao fitokonana izy ireo amin'ny toe-draharaha. Tao anatin'izay 2 herinandro lasa izay, mpanamory fiaramanidina 700 mahery no nifidy ny momba ilay tolokevitra fitokonana, nihaona tamin'ny tokonam-baravarana Taiwan mba hanaovana izany ho vato manan-kery. Hambara amin'ny 6 Aogositra ny valim-pifidianana, ary raha ekena ny fitokonana dia mpandeha mihoatra ny 30,000 no mety ho voan'izany.
Eva Air sy China Airlines - ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 2 voalohany ao Taiwan - dia mahatsapa ny fanerena fa tsy ny mpanamory fiaramanidina ihany fa ny mpikarakara ny sidina ihany koa no mampahafantatra ny fitarainany, milaza fa voatery manidina amin'ny toerana tsy azo antoka izy ireo ary koa miasa mafy loatra. Nanao fihetsiketsahana tao ivelan'ny Ministeran'ny Asa ireo mpikambana ao amin'ny Vondron'ireo mpanatrika sidina Taoyuan androany.
Ny fepetra manidina tsy azo antoka dia mifandraika indrindra amin'ny tafiotra mahery vaika, satria tsy misy lalàna ao amin'ny firenena izay mitaky ny fanafoanana ny sidina mandritra ny loza voajanahary. Amin'izao fotoana izao, ny lalàna dia mamela ny mpiasa haka ny andro fialan-tsasatra mandritra ny loza voajanahary raha tsy misy fialantsasatra atao amin'ny toerana onenan'izy ireo na any am-piasana na amin'ny lalan'ny fiverenany.
Nilaza ireo mpikarakara ny sidina fa zara raha manararaotra izany ny olona satria matahotra ny vokatry ny mpampiasa izy ireo. Nangataka tamin'ny Minisiteran'ny Asa ireo mpikarakara ny sidina mba hametraka lalàna hiarovana ny mpiasa fiaramanidina mandritra ny loza voajanahary. Na ilaina ny lalàna na tsia dia nihaona tamin'ny hevitra samy hafa.
Raha ny fahitana azy ankehitriny, dia miainga ny sidina mandritra ny rivo-doza. Vokatr'izany dia matetika misy korontana mahery vaika, ary ny mpiasa dia misedra ny fikasana hitazona ny mpandeha ho tony rehefa matahotra izy ireo.
Ny vanim-potoana rivo-doza any Taiwan dia manomboka amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra, ary ny Jolay ka hatramin'ny septambra no mahery indrindra sy mampidi-doza indrindra.
Tanànan'ny Aziatika izao dia mihoatra ny tanàna eropeana sy amerikana amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany
Vanuatu tondra-drano! Miaraka amin'ny mpitsidika